Kan Jiru Haa Dubbatu! Seenaa Wareegamtoota Oromoo Keessaa. – Oromedia
Home » Seenaa » Kan Jiru Haa Dubbatu! Seenaa Wareegamtoota Oromoo Keessaa.
Ajjeechaa suukkanneessaa bara sana raawwatame namni ijaan arge tokko akkas jechuun ibse ture. “Waan huunda caalaa haanga hardhaatti kan na gaddisisu, odoo lubbun isaanii keessaa hin ba’iin akka wayyaa isaani fi qophee isaani uffatanitti osoo iyyanii biyyoon akka itti deebi’u ajaja laatameen biyyoon isaan irra tuulamu isaati”
Previous: BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU
Next: ይድረስ ለጥላቻ “የታሪክ ምሁር”- ለዶ/ር ኃይሌ ላሬቦ